Proust Fanontaniana Wikipedia
Ny Proust fanontaniana dia fanontaniana natao malaza amin’ny ny valiny izay nanao ny frantsay mpanoratra Marcel Proust. Marcel Proust nahita ity fitsapana amin’ny faran’ny taonjato fahasivy ambin’ny folo, fony izy mbola zatovo. Ity malagasy lalao, niaraka indray, fara fahakeliny, roa taona dia atao hoe fitanisan-keloka. Izany rehetra voarakitra ao anatin’ny tahirin-tsary amin’ny teny anglisy avy amin’ny namany Antoinette, zanakavavin’i ho avy ny filoha Felix Faure, izay tany am-boalohany ny anaram-boninahitra dia»Ny Rakikira an-Tsoratra ny jiolahim-boto, Fihetseham-po, f»(album ho an’ny fitandremana ny eritreritra, fihetseham-pony, sns). Amin’izao fotoana izao, ity lalao ity karazana ao vogue lamaody avy any Angletera: ny fanontaniana dia afaka maneho ny fitiavanay sy ny ny faniriana.
Ny sora-tanana tany am-boalohany ny valiny daty, ny taona ny taona, tamin’ny fotoana ny asa an-tsitrapo nandritra ny taona iray tao amin’ny rezimanta e ny tongotra ny Orleans, na ny fotoana rehefa, ary dia mitondra ny lohateny hoe»Marcel Proust amin’ny alalan’ny tenany ihany». Hita amin’ny André Berge, dia amidy amin’ny lavanty eo dia mety ho ny vola euro. Ny fanontaniana fahatelo dia hita ao amin’ny aprily amin’ny mpivaro-boky ao parisy izay efa noraisinao tamin ny olona.
Izany dia authenticated mpampianatra Jean-Yves Pillowcase
Proust namaly tamin’ny jona, teo amin’ny faha-dimy ambin’ny folo taona. Ny mpanolotra fandaharana amin’ny fahitalavitra Bernard andry fototry ny fahitana fahafahana ho an’ny mpanoratra mba hanambara na lafin-javatra ny asa sy ny toetra, tsy maintsy iharan’ny fomba nentim-paharazana ny vahiny ny mba ny dikan-ny fanononana ny Proust fanontaniana eo amin’ny faran’ny ny fampisehoana ny kolontsaina ron-Kena. Aingam-panahy avy amin’ny Bernard andry fototry, James Lipton, ny miaramila sy ny fahitalavitra Ao anatin’ny Mpisehatra Studio, manaiky ny kintana eny amin’ny efijery lehibe american version indray nalaina avy amin’ny Proust fanontaniana. Proust dia tsy miverimberina ao mihitsy ny fanontaniana am-boalohany malagasy. Ankoatra ny fandikan-teny, izany dia misaraka fanontaniana, tsy niraharaha ny sasany, ary koa ny hafa
← Fifandraisana an-tserasera ny lahatsary
Free hihaona ankizivavy →